Sida loo sii daayo RAM-ka LG G2 150 Mb | Androidsis
Sidee looga xoreeyaa 150 Mb oo RAM ah LG G2-keena khiyaanadan fudud
Francisco Ruiz | | LG, Khiyaamada Android, Tababarada
Immisa idinka ah, Kuwa raacsan Androidsis hore ayaad u ogaan doontaan iyo waxaad ku ogaan doontaa casharradayda ama fiidiyowyadayda, Anigu waxaan ahay milkiilaha a LG G2 nooca D802 ama sidoo kale loo yaqaan LG G2 model caalami ah. Khiyaanooyin badan o Roms oo aan halkan kula wadaagayo dhammaantiin uu miraha tijaabada ah oo aan la leeyahay terminalkeyga, qaar ka mid ah Roms ama tabaha aan aniga qudhaydu isku dayo LG G2 ka dibna aan dhammaantiin idinla wadaago iyada oo la hubo inay si fiican u shaqeyn doonaan oo ay si fiican u ogaanayaan waxa aan ka hadlayo iyo waxaan kula talinayaa.
Xaaladdan oo kale aniga ayaa ku bari doona khiyaano fudud ama talo cidda aan la soconno hel bilaash 150 Mb oo ah xusuusta RAM ee LG G2. Waxay sidoo kale ansax u noqon kartaa moodellada kale ee terminal-ka oo aan ahayn LG G2, sida LG G3 in kastoo ay weli taasi jirto, ugu yaraan xilligan aanan awoodin inaan shaqsi ahaan u xaqiijiyo. Taasi waa sababta aan u weydiin lahaa qof kasta oo isku dayo, inuu faallo ka bixiyo faallooyinka isla isla boostada, haddii ay ku habboon tahay moodellada kale ee aan ka ahayn xarumaha LG sida LG G3.
Sida loo sii daayo 150 Mb ee xasuusta RAM ee LG G2, oo ku habboon dhammaan moodooyinka
Intaadan ku barin sii daayo kuwan 150 Mb ee RAM ee LG G2-keenaNooc kasta oo ay u egtahay ama nooca ay tahay, waxaan sharraxayaa xoogaa waxa aan qaban doonno, iyo cawaaqibka ay tallaabada aan qaadno yeelan doonto.
Khiyaanada ayaa ah in la joojiyo adeeg lagu kiciyo si ku-meel-gaar ah boosteejooyinka shirkadda LG, adeeg loo adeegsado aruurinta macluumaadka had iyo jeer taas oo ragga ka socda LG ay na xakameeyeen si aan u ogaano halista ay isticmaaleyaasha isticmaaleyaasha boosteejooyinka shirkadda, marka la eego xadgudubka jinsiga, qaawan, suicidio, iwm iwm
Adeeggan ayaa loo yaqaan MLT oo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan joojino markaan galno goobaha adeegga LG G2, qaar ka mid ah goobaha qarsoon waxaan dooneynaa inaan ku helno adoo ku qoraya cinwaanka 'LG G2' lambarka soo socda:
Halka aan ku khasbanaan doono beddel qoraalka geesinimada leh, Halka ay ku qoran tahay LG G2 model ee nooca gaarka ah ee terminalkeenna, kiiskeyga a LG G2 D802 caalami ah waxaan dhigeynaa nambarka soo socda si aan u helno liiska qarsoon:
Marka koodhkan la qoro, menu-ka meerimaha qarsoon ayaa ka muuqan doona meesha aan u baahan doonno ikhtiyaarka Imtixaanka MLT:
Hadda waa inaan kaliya gab fursada Enable "MLT waxay ku ordi doontaa after aftyer":
Joogida sidan, Hawl gab "MLT ma ordi doono qaniinyada aftter":
Hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan dib u bilowno LG G2 iyo Waxaan horeyba uheysan doonnaa 150 Mb oo RAM bilaash ah sidii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sidee looga xoreeyaa 150 Mb oo RAM ah LG G2-keena khiyaanadan fudud
Kuma shaqeynayo qaabkeyga VS980 4G
maxay noqon doontaa
Jawaab ku bixi Marvin Rafael Ancheta Cuéllar
Waxay u shaqeyn doontaa LG970 (Optimus Black) iyo LG Optimus G (E976)
Ku jawaab yaz zaz
Iskuday oo noo sheeg.
Sideed usameysay, waxaan hayaa vs980 mana geli karo, i caawi
Jawaab Rep Rep
Kuma shaqeynayo lg g2 D800-kayga waxay leedahay howshu way joogsatay, maxay tani noqon kartaa?
LG g3 ayuu ku shaqeeyaa
Ku jawaab Rau
Mahadsanid saaxiib, sidoo kale waan xaqiijinayaa Tijaabiyey oo shaqeynaya.
Waxay si fiican u shaqeysaa d805. Salaan iyo mahadsanid
Maxay ku kala duwan yihiin gelitaanka liiska qarsoon sida aad halkan ku dhigtay, taasi waa, 3845 # * 802 # iyo mid aan ka helay qoraal kale oo ah 277634 # * # maxaa yeelay labadooduba waxay soo galaan liiska qarsoon si isku mid ah oo waan doonayay si loo ogaado sida ay ugu kala duwan yihiin. Mahadsanid
on my VS980 4G waxay la shaqeysay lambar 277634 # * #
laakiin markaan galo ikhtiyaarka tijaabada MLT waxay ii sheegaysaa in adeega com.lg.hiddenmenu uu istaagay si uusan aniga aniga ii shaqeyn
Waa salaaman tahay Francisco, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ikhtiyaarkan uu horeyba ugu naafoobay Rom CloudyG3 v.2.0 maaddaama sidaas aan sameynayo ay iga saareyso liiska cuntada isagoo ii sheegaya geedi socod istaagay
Jawaab Ernesto Gutierrez
Waxaa suurtagal ah in Rom horeyba loo hagaajiyay oo adeegyo aan loo baahnayn laga reebay, tan waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo shirkadihii hore ee LG, labadaba LG G2 ama LG G3.
LG G ProLite D680 ayaa tijaabiyey oo si fiican u shaqeynayay. Mahadsanid!
Ku jawaab Guadalupe Trevino
Com.lge.hiddenmenu ayaa ii istaagay
Jawaab Fernando Mellone
khamiir leh dijo
hadday aniga ii shaqayso !!!! Waxaan leeyahay g2 mini iusacell waana jeclahay, maxaa kale oo aan ka qaatay?
Ku soo jawaab fertostado
Midkeyga waxaan heystaa D806 si fiican ayey u shaqeysay waxaan ka imid Argentina Salaan iyo mahadsanid
Ka shaqeeya d806 ah. Waxa aan jeclaan lahaa inaan ogaado waa ikhtiyaarka hoose ee oranaya USB DEBUGGING ayaa loogu talagalay
Ku jawaab matiasbostero
Waxay si fiican ugu shaqeysaa Lg G2 Mini d625. Waxaan kugula talinayaa inaadan cusbooneysiin ilaa ay ka tahay casriyeynta nooca cusub ee android. Cusboonaysiinta lg waa fashilmeysaa.
Qoraalkeyga lg pro lite ma uusan shaqeynin, wuxuu ii sheegayaa inay jirto dhibaato xiriir ah ama mmi koodhku uusan ansax ahayn, aad baan u bogaadinayaa hadaad ii sheegto waxa dhibaatadu tahay, Francisco?
U jawaab gaston
Waxaan cusbooneysiiyay lg g2 mini d625 oo aan ku cusboonaysiiyay cusbooneysiinta lg waana i tabeysaa. Sideen u tirtiraa cusbooneysiinta barnaamijkaas? Mahadsanid
Kuma shaqeynayo lg D625 (lg G2 mini), qolkeygu waa dib u habayn gaabis ah. Ma aqaan waxa la sameeyo fadlan caawi.
Hadday aniga ila shaqeynaysay d635, ha dhigin xarafka d
Ku jawaab himmelito
ka shaqeeyay d-805
Ku jawaab asasd
Waxay ka shaqeysaa LG G2 Mini D610, wixii aan sameeyay waxaa la dhigay 3845 # * 610 # iyo voila, ka dib waxaan sameeyay talaabooyinka soo socda. Ka qayb qaadasho wanaagsan
In LG Optimus G pro, halkii laga heli lahaa "MLT" waa "baaritaanka MPT"
Wax ku biir aad u fiican mahadsanid aad iyo aad.
Ku jawaab Randall
hadday tahay 97 dijo
Si fiican ayey iigu shaqeysay lg g pro lite oo markii hore qalad bay i siisay laakiin waa inay ku dhejiyaan nambarka unuggaaga dhamaadka, tusaale ahaan taydu waa D680 marka koodhku wuxuu u egyahay sidan 3845 # * 680 # iyo waxay fureysaa liiska
Waad salaaman tihiin. Waxaan haystaa g2 D806. Koodhka aad bixiso waxaan helayaa oo keliya NULL oo menu-ka qarsoon ma muuqdo.
Waxaan isku dayay on my lg g2 mini la rom asalka…. oo wanan bahal ah ka takhalusin !! Waxaan rabaa in aan rakibo rooti la badalay laakin aniga ayaa i baqaya…. Waxaan doonayaa inaan baaro oo aan helo waxa dhacaya ... maxaa yeelay haddii taleefanku aad u gaabis yahay !! ... waad ku mahadsan tahay caawimaadda!
Jawaab Uriel Tovar
On my Lg G2 d 806 ma shaqeynayo, qalad ayaan ku helay. Waxaan isku dayay labada koodh waxaana helayaa qalad isku mid ah. I caawi !!
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, qofna ma garanayaa sida loo furo ama loogu daro kooxaha 4G LTE, band 4, AWS (1700 iyo 2100) oo loogu talagalay lg g2 D802. Mahadsanid !!!
Waad salaaman tahay saaxiib waadna ku mahadsan tahay wax ku darsashadaada .. waxaad tahay qof caqli badan .. Waxaan haystaa LG G2 D805 waana caadi .. Ma iga caawin doontaa sida loo iftiimiyo saamiga kaydka 4.4.2 .. waxa dhacaya waxaan rabaa waa inaan nadiifiyo Rom mid cusub. Mahadsanid
Ikhtiyaarka MLT kuma muuqdo AT&T LG G2 D800. Ma jiraa nidaam kale oo lagu joojiyo tan oo lagu sii daayo RAM?
Dadku ha caawiyo !! Waxaan haystaa Lg mini 2 oo waxaan dhigay lambarka 3845 # * 625 # laakiin kama bixi karo halkaas waan dib u bilaabay laakiin halkaas ayey ku sii jirtaa. Qof ma ku dhacday?
Ku jawaab Paloma
Iima shaqeyso aniga markaan furaha dhigo, waxba ma muuqdaan, waxaan sameeyo.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa d802, waxaan ka imid Argentina 4g iima qaado.Ma taqaanaa sida loo kiciyo kooxdaas? Waxaan akhriyay in 1700 halkan lagu isticmaalo kaliya taasi kuma jirto liiska kooxaha lte
Ku jawaab Mimi
Horaanba u joojiyay, malaha sidii ay uga timid walaalkay, horay ayuu u sameeyay hahaha (lg g2 mini d265)
Sidee loo cusbooneysiiyaa Nexus 4 illaa 5.0 Lollipop Android
Soo dejiso dhammaan waraaqaha iyo codadka Android 5.0 Lollipop